"Namelona ireo zana-piangonana natoritory ny taonan’ny Famindrampo" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miarahaba anao Monsenera. Manao ahoana ny diosezy eto Ambanja ? Inona no laharam-pahamehana ho anareo eto?
Faly mandray anareo ao amin’ny gazety Lakroa mandalo aty aminay izahay ary faly mampiantrano anareo. Tsy tahaka an’ireo diosezy efa zokinjokiny izahay ka efa manana ivon-toerana fiofanana. Manaraka izany mbola vitsy ny relijiozy miasa eto. Eto ny Capucins izay namorona ny diosezy, manaraka ao ny Salésiens, misy koa ny Orionistes efa misy pretra 3 izy ireo mitazona paroasy. Vao tonga koa ny Saletins fa mbola pretra iray no tonga ao izay mamaky lay ao amin’ny disitrikan’Anahidrano atsimon’Antsohihy.
Ny Evangélisation no laharam-pahamehana ho anay. Miaraka amin’izany koa ny mila fanabeazana ary ny fiofanana. Tena mila an’ireo ity diosezy ity.
Manao ahoana ny endrik’izany fanabeazana izany
Miezaka ny diosezy hanamafy ny sekoly katolika na an-tanàna na any ambanivohitra. Raha ny any ambanivohitra dia manana sekoly primaire avokoa. Raha ny an-tanàna lehibe indray dia manana sekoly, misy secondaire daholo izy ireo. Misy ny efa manana lisea ka tanjona ny hananan’ny disitrika misionera tsirairay avy ny lisea ao aminy. Nanokatra oniversite any Antsohihy ny diosezy miaraka amin’ny ASJA ao Antsirabe. Filière agronomie sy droit no nanombohana azy. Ry zareo ao amin’ny ASJA no misahana ny pedagojia, ny diosezy kosa no miandraikitra ny lafiny administration. Ezahina mitovy lenta amin’izay misy any Antsirabe ny atolotray eto, mitovy ny programa. Hivoaka amin’ity taona 2016 ity ny andiany voalohany amin’ireo hahazo Licence. Hitarina tsikelikely ny lalam-piofanana. Hosokafana amin’ny taona ho avy ny économie sy commerce.
Raha ny momba ny fiofanana indray dia mitodika amin’ny fikambanana rehetra ny diosezy. Tsy mora izany satria sahirana ny olona ary tsy mahafoy fotoana.
Raha mandalo ao an-tanàna izahay Monsenera dia mahatazana tovovavy tena mbola tanora efa mitaiza zaza. Inona no azo ambara momba izany?
Miezaka koa ny diosezy mirotsaka eo amin’ny sosialy. Ny masera Divine Providence izao dia mitana dispensaire maromaro, misy koa léproserie tuberculeux.
Raha momba ny fanontaniana teo dia hita fa be dia be ny zazakely beazin’ny dadabe na ny nenibe. Miteraka tsy manambady ny tanora ary rehefa mahita vady indray tsy mila zaza ny vady vaovao. Izay no mahatonga ny zazakely ho eo amin’ny dadabe na ny nenibe. Lasa mifindrafindra fiangonana na sekoly ilay zazakely. Betsaka ny tokantrano no tsy maharitra. Maivana loatra ny dikan’ny Fianakaviana ho an’ny olona. Hita taratra izany eo amin’ny fianakavian’ny seminarista. Tsy mijery ireo lasa aty amin’ny petit séminaire intsony ny fianakaviana kanefa dia manana adidy lehibe amin’ireo ny fianakaviana.
Isan’ny olana lehibe hitako koa ny fitiavana vola tafahoatra ilay antsoina hoe argent facile et immédiat. Miteraka fitaka sy fanaovana kolikoly io argent facile et immédiat io. Sakana lehibe ho an’ny évangélisation io fitiavam-bola tafahoatra io.
Manao ahoana kosa ny momba ireo mpizahatany ?
Betsaka ny toerana mahasarika mpizahatany na lieux touristiques ato anatin’ny diosezy. Maro ireo mpizahatany tonga. Misy ireo mpizahatany tsara fanahy. Tsy mametraka olana izy ireny. Fa misy koa ireo manararaotra ka manimba ny tanora. Ohatra hita any Nosy Be izany. Ny mampalahelo dia miray tsikombakomba na complice ireo ray aman-dreny sasany.
Ahoana ny ampifandraisana an’izany rehetra izany amin’ny taonan’ny Famindrampo ?
Tena zava-dehibe tokoa ny nanaovana ity taonan’ny Famindrampo ity. Nanokatra varavarana masina ny Papa ary nitondra hafaliana ho an’ny olon-drehetra. Teo aloha dia mihevitra ny olona fa mavesatra ny fahotana ka tsy ho voavonjy intsony izy ireo. Fa rehefa nambara fa misokatra ny varavarana dia niteraka hafaliana izany. Mety ho resy noho ny famindrampon’Andriamanitra ny ratsy.
Ny vokatra tsapa dia na disitrika na zanam-piangonana maromaro izay hita fa matimaty aza dia toa velona indray. Ireo kristianina tao anatiny ihany no nanao ny fikarakarana toy ny vavaka, ny alim-bavaka, fitsaohana masina, procession tsotsotra... Vokatr’izany: misy ny niroso amin’ny mariazy, tao ny vonona hampianatra katesizy, misy ny mirotsaka manao asa soa sy ny sisa.